Senza ngokwezifiso iinxalenye zentsimbi.Ubuchule bethu bubandakanya ukusika iFlame, ukusika iLaser, ukubumba, ukugoba iityhubhu, iWelding kunye nePowder coating.Sisebenza ngokukhethekileyo kwintsimbi, intsimbi engatyiwa kunye neentsimbi zealuminiyam.Sinokwakha izakhiwo zentsimbi ezinkulu okanye ezincinci.Sinikezela ngomgangatho olungileyo we-welding, ulawulo lwezinto ezibonakalayo kunye nokuveliswa ngokukhawuleza.
Izahlulo zeWelding yeNsimbi yeSintu eSiko.
Custom CNC Laser Cutting Welding Parts Isitampu Products
Iworkshop yethu yobuchwephesha enamava atyebileyo ekwenzeni iintlobo ngeentlobo zeendawo zokutywina zentsimbi, ezinjengendawo yokwenza isinyithi, iinxalenye zentsimbi ezinzulu zokuzoba, iintsimbi zokugoba, iintsimbi zokuwelda, njl.
Umzi-mveliso wenkonzo yokusika i-laser echanekileyo ephezulu
I-OEM ye-Welding Metal Fabrication kunye ne-Hot Dip eGalvanized Finishing
I-OEM ye-Welding Metal Fabrication kunye ne-Hot Dip eGalvanized Finishing.
Iinxalenye zokuFakwa kweNtsimbi eNgatyiwayo ngokweSiko ukusuka kwi-ISO 9001 kwiFactory eqinisekisiweyo
Ukugoba intsimbi yesiko kunye neLaser Cutting Fabrication Welding Products
Ukugoba intsimbi yesiko yesiNtu, iWelding Fabrication Products